Nanjavona avy tao amin'ny Apple Watch ny Instagram miaraka amin'ny fanavaozana farany farany. Avy amin'ny mac aho
Nanjavona tao amin'ny Apple Watch ny Instagram niaraka tamin'ny fanavaozana farany
Raha nanavao ny iPhone ho an'ny kinova farany an'ny Instagram ianao, 39.0, ary manana Apple Watch ianao dia hanana gaga mahatsiravina: Nanjavona ny Instagram ho an'ny Apple Watch. Izany dia izao, na afaka manaraka ianao, mandritra ny fotoana fohy, ny sakafonao amin'ny famantaranandro Apple.
Tsy maintsy miverina amin'ny fampiharana voalohany an'ny Apple Watch isika hahafantarana izay ny antony lehibe mahatonga an'ity fanjavonana ity. Ary izany ve Instagram dia novolavolaina teo ambanin'ny watchKit 1.0, izay niankina tamin'ny iPhone mba handeha tsara. Na izany aza, Apple dia efa nampitandrina an'izany Hatramin'ny 1 aprily 2018 dia nijanona tsy nanohana an'ity sehatra ity intsony izy. Ny rindranasa Apple Watch rehetra dia tsy maintsy nateraka ary novolavolaina teo ambanin'ny kit fampandrosoana ho an'ny WatchKit 2.0 (SDK).
Hatramin'izao, ny Instagram ho an'ny Apple Watch dia niasa ho toy ny fanitarana iray hafa ny rindranasa nananantsika tamin'ny iPhone. Na izany aza, ny tambajotra sosialy dia tsy sahy namoaka kinova Instagram ho an'ny Apple Watch izay hiasa irery amin'ny smartwatch, na dia manana fahaizana mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi aza izy ary tato ho ato dia ny mampiasa tamba-jotra LTE - any Espana dia mbola miandry ny kinova izahay.
Araka ny voalaza avy 9to5mac, mbola Tsy fantatsika raha maharitra io fanjavonana io sa tsy maintsy jerentsika raha aorian'ity fiatraikany amin'ny haino aman-jery ity dia mampivelatra ny Instagram ary mandefa kinova tsy miankina ho an'ny Apple Watch —Ny zavatra efa nampanantenain'i Google miaraka amin'ny Maps. Ankehitriny, amin'izao fotoana izao dia efa misy fampiharana maro izay nidina avy tao anaty fiara ary nifindra niala ny sehatry ny famantaranandro marani-tsaina. Ny sasany amin'izy ireo dia: Slack — ilay fampiharana fandefasan-kafatra mailaka malaza izay miasa tsara amin'ny asan'ny vondrona—, Twitter, Amazon, eBay ary Google Maps.
Ho an'ny ambiny, toa izany Ireo mpampiasa Apple Watch dia tsy nitaraina loatra momba ireo tsy fahatongavana rehetra noresahinay ireo. Ary ny fampiasana ny famantaranandro marani-tsaina dia mitodika amin'ny fomba hafa - na i Apple aza manatona azy amin'ity fomba ity -, toy ny fahasalamana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Nanjavona tao amin'ny Apple Watch ny Instagram niaraka tamin'ny fanavaozana farany
Juuk Vitero, mihoatra ny tady famolavolana ho an'ny Apple Watch